न्यायालय नधम्क्याउन चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
न्यायालय नधम्क्याउन चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
लेखक : लेखापढी २५ पुष २०७७, शनिबार १८:१८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई धम्क्याउने, अलमल्याउने र गुमराहमा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार सार्वजनिक भएको चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तिमाथि आपत्ति जनाएका छन्।
आफ्नो पक्षका युवा संघका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालतलाई नधक्याउन सचेत गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने? भन्दै सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
‘उहाँहरुले जे भन्यो, त्यहीँ हुनुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो?, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
आफू दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री भएकाले संसदमा कुनै विकल्प नरहेको भन्दै संसद पुनःस्थापना नहुने दोहोर्‍याए । उनले संसद विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गरेको तर्क गरे । www.lekhapadhi.com